UWalt Mossberg, Intatheli eyintandokazi kaSteve Jobs, Retires | Ndisuka mac
Kuwo wonke umsebenzi wakhe, uSteve Jobs wayehlala ethembele kuWalt Mossberg, enye yeentatheli zeetekhnoloji ezimbalwa ezaziseshishini. Ngoku usebenza nomhleli wesigqeba seThe Verge kunye neRecode, kodwa ukuqala kwakhe kwabuyela ku-1991, xa wabhala ikholamu yeTekhnoloji yobuqu kwiWall Street Journal.
Ukusukela oko yaqalwa, iMossberg inegalelo kwiipodcast ezahlukeneyo kwaye yenze inani elikhulu leenkomfa kunye nokupapashwa. Phakathi kwempumelelo yakhe buqu asifumanisi ukuba phantse sisandla sasekunene sikaSteve Jobs, owamcela iingcebiso amaxesha amaninzi, kodwa ukwangomnye weentatheli ezimbini ezikwazileyo ukudibanisa uBill Gates noSteve Jobs kudliwanondlebe.
Kolu dliwanondlebe oludibeneyo, olwenzeka ngo-2007, enye yezimbalwa apho uSteve Jobs wayephantse wangabikho kwaphela kwindawo yakhe yokuthuthuzela, igosa eliyintloko lika-Apple laphelisa udliwanondlebe ngokucaphula iiBeatles ukuba zifumanise ubudlelwane bakhe neGates.
UMossberg uthi usenzile esi sigqibo emva kokucinga kakhulu ngokuthatha umhlala-phantsi, ingcinga eza kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuba emva kokuphawula ngenkosikazi yakhe, usapho kunye nabahlobo abasondeleyo, wagqiba ekubeni asithathe, ukuze sikhuphele ukuba kufanelekile kuhlobo oluthile lokugula, qinisekisa nje ukuba lixesha elifanelekileyo lokwenza.
UMossberg uyakuqinisekisa ukuba uzakuqhubeka nokubhala manqaphanqapha, uzakusebenzisana neenkqubo, iinkqubo zeTV kunye neepodcast kude kube yinyanga kaJuni, inyanga apho azakuthatha umhlala-phantsi ngokusisigxina. Ithekhinoloji yobuchwephesha, utshilo, itshintshile kakhulu ukusukela ngo-1991, ngenxa yesakhono se-Intanethi sokusebenza kunye nokuqhushumba ekuthandeni ishishini lobugcisa ngokubanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UWalt Mossberg, intatheli eyintandokazi kaSteve Jobs, Retires